အဘတို့ရွာက ရောက်လာကြသူများ အကြောင်း (၁) – The Blog of Aung
ဆင်းရဲနွမ်းပါးကြလို့လား? အရည်အချင်း မရှိကြလို့လား? လက်ကြောမတင်းကြလို့လား? အမျိုးမျိုး ဆန်းစစ်ကြည့်မိပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ – အချောင်စားရတာကို အရသာတွေ့ပြီး၊ အချောင် လိုက်ရှာရတာကို ဝါသနာပါလို့သာပင် ဖြစ်ပါတော့မယ်။
ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် မြို့ကြီးပြကြီးများပေါ်မှာ အချောင်ကို ကြိုက်၊ အချောင်လိုက်ပြီး၊ အချောင်ရှာစားတဲ့ အလုပ်ဟာ အလွန်ရွံစရာ ကောင်းပါတဲ့ အကြောင်း အဘတို့ ရွာသားများ သတိထားမိ စေချင်ပါတော့တယ်။
Author ပင်တိုင်စာရေးသူPosted on August 21, 2019 August 21, 2019 Categories အတွေ့အကြုံTags လူဇရိုက်
One thought on “အဘတို့ရွာက ရောက်လာကြသူများ အကြောင်း (၁)”
အမှန်ဘဲဗျာ ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ် သူတောင်းစားတွေလိုဘဲ
Previous Previous post: စာတတ်သူနဲ့ ပညာတတ်သူ
Next Next post: အဘတို့ရွာက ရောက်လာကြသူများ အကြောင်း (၂)